Umthengisi kunye noMthengisi weePET ICopak
Iingubo zeNdebe yePET
Umzi mveliso weShanghai COPAK., LTD yinkampani yobungcali kwimveliso yezinto ezibonakalayo zePET. Ukugxininisa kwindebe yesiselo se-PET, ikomityi ye-ice cream, i-PET indebe yokunonga, i-PET yokuhambisa isitya sokutya, indebe yesabelo se-PET, iibhotile ze-PET njalo njalo. NgokuqinisekileyoIZIBONELELO ZE-PET CUP Zonke iimveliso zethu ziyahambelana nemigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye inandipha udumo olukhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Ukusetyenziswa: PET CUP
5. Iphakheji: 1000PCS / CTN
Umzi mveliso weShanghai COPAK., LTD yinkampani yobungcali kwimveliso yezinto ezibonakalayo zePET. Ukugxininisa kwindebe yesiselo se-PET, ikomityi ye-ice cream, i-PET indebe yokunonga, i-PET yokuhambisa isitya sokutya, indebe yesabelo se-PET, iibhotile ze-PET njalo njalo. Ngokuqinisekileyo zonke iimveliso zePET CUP LIDS zinikezelwa kwaye zithobela igama kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Singomnye wabathengisi ababalaseleyo bePET CUP e-china. Ngomasifundisane we-morden, izixhobo zobuchwephesha obuphezulu, imeko entle kunye nentofontofo, kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, iikomityi zethu ze-PET kunye neebhotile zithunyelwe kwilizwe liphela.
Inkampani yethu igcina inkolelo "yokusebenzisana okunyanisekileyo, Obusemagqabini ubunjani, iinkonzo ezigqwesileyo". Sisoloko sizama ukubonelela ngemveliso kunye nenkonzo engcono.
Ukujonge phambili kubudlelwane beshishini nawe. Iya kuba yintsebenziswano yokuphumelela.
Ngoko INDAWO YEPETezineziciko, siphuhlise iipatheni ezininzi isicaba kunye idome isiciko. Ububanzi buhluka ukusuka kubukhulu obuyi-4.5mm, 6.2mm7.4mm, 7.8mm, ukuya kuma-90mm kunye nama-98mm njalo njalo. Ububanzi beEzineziciko indebe PETkuxhomekeke kubungakanani bomlomo wendebe ye-PET uqobo. Nokuba ungakhetha oluphi uhlobo, zonke zihambelana kakuhle nongqameko lwendebe ye-PET. Ke akukho ukuvuza kukuqinisekisa okusisiseko komgangatho.
Iimpawu zomnqwazi: I-PET ezineziciko zekomityi, IPUP YOKUPHAWULA, ukuphumelela ukusebenzisana, AKUKHO KUVUTSHA, ICE CREAM PET CUP
Okulandelayo: Indebe ye-PET yokuNcamla
Indebe yePET 16oz
Indebe ye-OEM ODM PET
Indebe yeplastikhi ecacileyo
Indebe yePET eTshayina